Ciidanka AMISOM iyo AL-shabaab oo ku dagaalamay gobolka Hiiraan. – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidanka AMISOM iyo AL-shabaab oo ku dagaalamay gobolka Hiiraan.
Star FM February 14, 2019
Wararka ka imaanaya degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegay in halkaasi uu dagaal culus ku dhexmaray Ciidamada Nabad ilaalinta Midowga Africa iyo dagaalameyaasha AL-shabaab.
Saldhig ay ciidamada Jamhuuriyada Jabuuti ee qaybta ka ah AMISOM ku leeyihiin degmada Jalalaqsi ayay wararku sheegayaan inay weerar Madaafiic ah ku qaadeen xubnaha shabaabka ee gobolkaasi ku sugan kadibna uu dagaalku ka dhashay.
wararka ayaa sheegaya in dagaalku mudo Saacad ka badan ka socday agagaaarka Saldhiga Ciidamada Jabuuti ay ku leeyihiin degmada Jalalaqsi ee gobolka hiiraan.
Masuuliyiinta gobolka hiiraan iyo ciidamada Amaanka ayaa sheegay in dagaalkaasi uu ku sii fiday deegaano kale oo ka baxsan magaalada Jalalaqsi,xoggaga AL-shabaab ayaa la sheegay inay gudaha magaalada markii hore si dhuumaalaysi ah ku soo galeen kadibna ay xerada Ciimada Jabuuti madaafiic ku weerareen.
Baraha Internetka ee ay shabaabku wararkooda ku faafiyaan ayaay ku sheegeen inay khasaare gaarsiiyeen Ciidamada AMISOM wallow aysan jirin cid xaqiijinaysa sheekashadooda.
Dhanka kale ma jira wax war ah oo ku aadan dagaalkaas xalay ka dhacay degmada Jalalaqsi oo ka soo baxay Taliska Ciidanka AMISOM,kuwa Soomaaliya,maamulka Gobolka Hiiraan iyo kan degmada Jalalaqsi midna.
Dagaalameyaasha AL-shabaab ayaa dhowr mar oo hore waxay weeraro ku qaadeen ciidamada Jabuuti ee ku sugan gobolka hiiraan waxaana sidoo kale uu gobolkaasi ka mid yahay meelaha diyaaradaha dagaalka ee dalka Maraykanku duqaymaha ka fuliyaan.
Duqaymo diyaaradeed oo kal hore ka dhacday gobolka hiiraan ayay Taliska Ciidamada Maraykanka ee ku sugan qaarada Africa ee magacooda loo yaqano AFRICOM waxay ku sheegeen inay ku dileen ugu yaraan 24 dagaalame oo ka tirsan Ururka AL-shabaab.
← Qoyska Caroline Mwatha oo doonaya in meydkeeda si madax bannaan loo baaro
In ka badan 200 oo ah garyaqaano cusub oo uu soo dhaweynayo Maraga →